Mpanamboatra sy mpamatsy valam-by valam-by China Classical | Longjie
Longjie Railing Systems dia mamokatra profil mombamomba ny lalamby sy ny fomba fampidirana azy fa fantatray fa ny asa sasany dia mitaky zavatra fanao tanteraka. Any Longjie dia miara-miasa aminao izahay amin'ny famolavolana ny mety indrindra amin'ny tetikasanao. Izahay dia manana fahaizana mampifanaraka ny rafitra lalamby mifanaraka amin'ny fahitan'ny tetikasanao.
1. Tsy misy asa intsony aorian'ny fametrahana indray mandeha.
2. Tsara kalitao ary mafy orina toy ny vatolampy.
3. kanto izy ary afaka handravaka ny tranon'ny olona.
4. Mora hitazona.
Ny sasany amin'ny santionany Longjie Railing
→ Trano （tohatra, lavarangana sns）
→ Garden sy Yard
→ Trano fiompiana
PICKET FCE Tombony
Haingana sy mora!
Mora apetraka amin'ny fijery misokatra avy amin'izay toerana misy anao amin'ny tokotaninao na ny patio.
Kitapo fonosana Baluster hafa
Miadana sy sarotra:
Ny ankamaroan'ny mpamatsy baluster infill dia tsy nandany ny fotoana tamin'ny famolavolana rafitra iray manontolo hanafainganana ny fametrahana ary hampihena ny isan'ny singa miteraka tetikasa sarotra sy ara-potoana.
Ny fitaovana fanjifana vy an-dranomasina sy kalitao avo lenta no mahatonga an'io fikojakojana io maimaimpoana.
Rafitra vy, vy na fitambarana
Maintenance avo lenta.
Ny hazo, ny vy, na ny lalamby mitambatra dia samy mila fikajiana mitohy tsy tapaka. Ny hazo dia tsy maintsy voaloko na voaloto ary tazomina isan-taona. Ny vy dia tsy maintsy hosodina loko isaky ny 5 taona hanampiana amin'ny fisorohana ny harafesina sy ny harafesina. Ny Composite dia manana indostrian'ny mpanadio, tasy ary fanavaozana mba hitazomana ny endrika ivelany.
Mivezivezy amin'ny rivotra be!
Ny lalamby Baluster dia manolotra fahitana avo sy fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny lalantsara. Izy io dia mamela ny rivotra hikoriana hanampy anao hitony mandritra ireo andro fahavaratra mafana ireo.
Tsy misy rivotra mihodina.
Na dia manome fahitana miavaka aza ny valin'ny takelaka fitaratra dia mampihena be ihany koa ny fivezivezin'ny rivotra… Longjie baluster Infill dia mampifangaro ireo lafin-javatra roa ireo amin'ny vokatra kalitao premium.
Anarana Pvc Classic Railing
Color White / Tan / Black
Anaran'ny marika: Shanghai Longjie
Warranty Mihoatra ny 5 taona
Fahaizana manome: 300 Ton / taonina isam-bolana
Antsipirian'ny fonosana Pe Bag And Pallet
Port Seranan-tsambon'i Waigaoqiao Shanghai, Seranan-tsabatra Yangshan Shanghai, Seranan-tsambo Huangpu Guangzhou
Material PVC virijiny 100%.
Fanoherana ny rivotra thePVC Fefy rafitra dia hahatohitra ny haavon'ny rivotra 10. ambonin'ny
Fitsaboana ambonin'ny tany PVC Coating
tombony Fametrahana mora, tantara an-taonany, mora, toekarena, fandefasana haingana
Application Haingon-trano, tokontany, làlana, zaridaina.
Mampiasà modely Longjie dia afaka mamonjy ny sarany amin'ny fanaovana lasitra vaovao
*** Fanamarihana: Rehefa havaozina tsy tapaka ny vokatra, azafady mifandraisa aminay raha mila fanazavana farany. ***
Ny fizotry ny fanamboarana PVC Classical Railing
Previous: Kitapo momba ny tsiambaratelo momba ny vinyl
Manaraka: Fiakarana tohatra fiakarana Premium